Mitety an'i Torkia | Vaovao momba ny dia
Ataovy ao an-tsaina ny sasany amin'ireo Ofertas atolotry ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia atoro anao foana, hahafahana misafidy ny safidy tsara indrindra rehefa mandeha. Iray amin'ireo tolo-kevitra mahaliana hahafantarana an'i Torkia ny tolotra natolotry ny orinasa Lufthansa, izay ahafahan'ny mpizahatany mivezivezy avy any Barcelona mankany Istanbul amin'ny vidiny tena manintona.
Ny iray amin'ireo tolo-kevitra dia ny hahafahana mivezivezy mandritra ny volana Novambra hatramin'ny tany turkish ary ny vidiny fanombohana dia manodidina ny 179 euro, vidiny misy andro sy fiverenana, ka nivadika ho iray amin'ireo tolotra tsara indrindra handinihana izao eo antenatenan'ny fararano, izay iray amin'ireo fotoana mety ahafahana manao hanao dia mahaliana indrindra.
Ilaina hatrany ny manao fitsangatsanganana hafahafa mandritra ny fararano ary ny volana novambra dia iray amin'ireo volana tian'ny mpizahatany maro. Azo antoka fa ny manao famandrihana izao dia afaka manararaotra an'ity tolotra ity miaraka a maka fanahy be, indrindra hahafahana mankafy dia amin'ny mpivady amin'ny alàlan'ity tanàna mahafinaritra ity.
Tsy misy isalasalana fa mandeha manodidina an'i Eropa Matetika dia mahasarika mandritra ny taona izy io ary ny mankafy ny moske sy ny kolontsain'ny Istanbul dia famporisihana fanampiny rehefa mitety an'i Torkia, izay toerana ahafahanao mankafy lovia mahazatra sy mampiavaka azy indrindra ho an'ireo mpizahatany rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Andro fialantsasatra manintona any Istanbul
Ny Moske volamena Imam Ali any Iràka